उपत्यकामा निधेषज्ञा हुँदा पनि किन फैलिरहेको छ संक्रमण? - समय-समाचार
उपत्यकामा निधेषज्ञा हुँदा पनि किन फैलिरहेको छ संक्रमण?
१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०६:२८
काठमाडौं, भदाै १९ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी ग¥यो। त्यसपछि दुई पटक एक–एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपिएको छ।
दोस्रो पटक भदौ १० गतेबाट १७ गतेसम्म गरिएको निषेधाज्ञा फेरि भदौ २४ गतेसम्मका लागि थपिएको छ। तर संक्रमण न्यूनीकरण गर्न भन्दै लगाइएको निषेधाज्ञामा हरेक दिन संक्रमितको संख्या भने बढिरहेको छ।
निषेधाज्ञा सुरु भएपछि यो १६ दिनको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ४ हजार ६ सय ९८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
निषेधाज्ञा जारी भएको पहिलो साता भदौ १० गतेसम्म २ हजार ५७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। दोस्रो भदौ ११ देखि १८ गतेसम्म २ हजार ६ सय ४२ जनामा संक्रमण देखिएको छ।
भदौ ३ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको अवस्था
भदौ ३– १५९ जना
भदौ ४– २०० जना
भदौ ५– १८२ जना
भदौ ६– २१६ जना
भदौ ७– १६६ जना
भदौ ८– २२४ जना
भदौ ९– २३२ जना
भदौ १०– ३०१ जना
भदौ ११– ३७७ जना
भदौ १२– ४१५ जना
भदौ १३– १८६ जना
भदौ १४–४२९ जना
भदौ १५– २९८ जना
भदौ १६– ४८१ जना
भदौ १७– ३८८ जना
भदौ १८–४४५ जना
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले भाइरस संक्रमणको साइकल २ देखि ३ साताको हुने भएकाले निषेधाज्ञामा बढेको नभई समय त्यस्तै परेको बताए।
उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा घरघरमा कोरोना छ भनेरै हामीले निषेधाज्ञा बढाउन अनुरोध गरेका हौँ। पहिलो कुरा त माइतघर र बालुवाटारको भीड र जुलुसले नै कोरोना घरघरमा पुर्‍याइसकेको छ। त्यही कथा आज दोहोरिएको छ। त्यसैले धेरैलाई समस्यामा पार्छ।’
उनले ललितपुरमा आज मछिन्द्रनाथको जात्रामा निस्किएको भीडले पनि संक्रमण बढाउने बताए।
प्रवक्ता गौतमले मास्क लगाएर दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरालाई हल्का रुपमा लिँदा समेत संक्रमण फैलिएको बताए।
मास्कको प्रयोग, दुई मिटरभन्दा बढीको भौतिक दूरी र हातको नियमित सरसफाइलाई पालना गर्न प्रवक्ता गौतमले अनुरोध गरे।
चिकित्सकहरुले एक महिनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा भएर पनि संक्रमण घटेन भने त्यसको निरन्तरताको औचित्य नहुने र संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने बताएका छन्।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि संक्रमितको संख्या किन बढिरहेको छ?
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन निषेधाज्ञा जारी भएपछि मानिस घरभित्रै थुनिँदा परिवारभित्रै संक्रमण फैलिएको बताउँछन्।
‘कोही व्यक्ति निषेधाज्ञाको दुई दिनअघि पोजिटिभ भएको छ तर जाँच भएको छैन, सो समयमा उसले कति मानिस भेटिसकेको हुन्छ। केही लक्षण देखिएर परीक्षण गरी रिपोर्ट आउने समयसम्म धेरैलाई सरिसकेको हुन्छ। ती व्यक्तिले पनि अन्यलाई सारिसकेका हुन्छन्। त्यसकारणले पनि बढेको हुनसक्छ,’ डा पुन भन्छन्।
उनले पछिल्लो समय संक्रमण परिवारभित्रै धेरै फैलिएको र उनले निषेधाज्ञाको पनि प्रभावकारी पालना भएको अनुभव गरेको बताए।
उनले भने, ‘निधेषाज्ञाको समयमा परिवारभित्र भेटघाट, बाहिर सडकमा मान्छे नदेखिएको भए पनि भित्रभित्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि संक्रमण बढाएको हुनसक्छ।’